UCell C uchithe uTelkom uzama ukuwuthenga | News24
Johannesburg – Inkampani yomakhalekhukhwini egutshuzelwe yizinkinga, uCell C, usuchithe isiphakamiso sokuyithenga nebesenziwe ngenye inkampani yezokuxhumana, uTelkom, yathi ukuthengwa kwayo inkampani eku-JSE, iBlue Label Telecoms, kusaqhubeka.
Kuyimanje iBlue Label Telecoms isezinhlelweni zokuthenga ingxenye engu-45% wobunikazi bale nkampani yomakhalekhukhwini engeyesithathu ngobukhulu eNingizimu Afrika ngesamba semali engu-R5.5bn.
USihlalo wakwaCell C, uMohammed Hariri, uthi le nkampani ithole isiphakamiso ebesingaceliwe, esingabophezeli futhi esinemibandela esivela kuTelkom sokuthenga le nkampani.
“Abaqondisi bebhodi lakwaCell C bangathanda ukukuqinisekisa ukuthi uCell C usuvele usungene ezivumelwaneni ezibophezelayo nalapho usuzibophezele khona ekuthengweni kwawo yiBlue Label Telecoms Limited, phakathi kwezinye izinhlangothi,” kusho uHariri esitatimendeni.
Uqhube wathi uCell C usuthathe isinqumo sokuthi ungazibandakanyi kunoma ngabe yiziphi izivumelwano.
Muva nje uCell C usanda kwehliselwa ezingeni elisesigabeni esiphansi okuyisigaba ‘D’ yisikhungo esikelisa isimo samabhizinisi kanye neminotho yamazwe, iStandard & Poor’s, - nokuyizinga eliphansi kakhulu ukuthi kukleliswe kulona inkampani.
IBlue Label Telecoms isanda kudalula kubanikazi bamasheya akwaCell C ukuthi uCell C wenze inzuzo ka-R2.8m ezinyangeni eziyisithupha kuze kube nguJuni mhlaka-30 kunyaka ka-2016.